Feo avy any Nizeria sy Ghana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2018 0:35 GMT
Nitatitra ny fianjeran'ny fiaramanidina Belleview tany Nizeria i Chippla. Niresaka ny ora vitsy nianjeran'ny fiaramanidina izy. Namoaka ny fitantarana momba ny fanehoan-kevitr'ireo Nizeriana momba ny Zotra Belleview ihany koa izy sy ny hoe nahoana ny Nizeriana no nihevitra izany ho ilay azo antoka indrindra, mandra-pahatongan'io Alahady mainty io. Nanontany momba ny ezaka fikarohana nataon'ny Nizeriana i UKNaija, nahoana no nakatona ny fahitalavitra izay nandefa ny toerana nisy ny fanjerana, ankoatra ny hafa.
Naneho ny fomba fijeriny momba ireo Nizeriana izay mibahan-toerana be loatra ao an-dohany i Andriamanitra i TRAE days. Milaza amintsika izy fa tsy miresaka ny Nizeriana raha tsy mampiditra ny fihetseham-pon'Andriamanitra. Nanome ohatra ireo karazan'olo-malaza ao amin'ny firenena izay nanonona an'Andriamanitra tao anatin'ny lahateniny izy raha tokony “hiresaka tsotra fotsiny” izy ireo.
Nitatitra momba ilay mpisolovava miaro ny zon'olombelona Nizeriana, Ramatoa Hauwa Ibrahim izay nahazo loka ho an'ny “fahalalahan-tsaina” i Black Looks.
Nitatitra ny fanadihadiana nataon'ny Toxic Trade Watchdog , Basel Action Network (BAN) i Abuja City ary nanamarika an'i Nizeria ho toy ny fanariam-pako nomerika amin'ny rafitra solosaina lany andro sy manimba ny tontolo iainana. Manokatra ny maso ity lahatsoratra ity, indrindra fa mitombo ny isan'ireo mpampiasa solosaina ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao.
Mbola miaraka amin'ny resaka solosaina ihany, i Timbuktu Chronicles nitatitra ny “teny feno fitiavan-tenan'ny mpitondrantenin'ny Microsoft Nigeria, tsy mila ny Rindrambaiko Maimaimpoana Open Source i Afrika”. Nahoana? Araka ny filazan'i Microsoft hoe “Afaka manome ny olona rindrambaiko na solosaina maimaimpoana [malalaka] ianareo, saingy tsy manana ny traikefa amin'ny fampiasana izany izy ireo”. Satria tsena goavana tsy voatrandraky ny Microsoft i Afrika. Mazava avy amin'ireo fanambaràna ireo fa miomana amin'ny fanoherana ny famoahana ny rindrambaiko open source avy amin'ny FOSS izay efa nialoha lalana amin'ny maha-malalaka sy maimaim-poana azy izy ireo.
Miresaka ny diany tany amin'ny faritra avaratr'i Ghana ny Ghana Journal. Miresaka ny fiainan'ny mponina eny amin'ny tranobongo Ghaneana sy ireo olana atrehin'ny mponina ny lahatsorany. Notateriny ny hetsiky ny Federasionan'ny Mponina Ghaneana Tsy Manan-kialofana, tambajotra iray tarihan'ny vondrom-piarahamonina avy amin'ny tranombongo manerana ny firenena mba hanampiana ny vahoaka eny an-toerana. Manana sary mahaliana ihany koa izy.
Manana fanadihadiana momba ny boky “Bloodchild” nosoratan'ilay mpanoratra Amerikana Afrikana, Octavia Butler ny Ramblings of an African Geek.